သူမလိုချင်တဲ့ချွေးမလေးရဲ့type ကိုဒဲ့ရေးလိုက်တဲ့ရေမွန်ရဲ့ မိခင် – Shwe Thadin
ပရိတ်သတ်ကြီးရေကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သားဖြစ်သူရေမွန်ကိုအစစအရာရာစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေကို ရေမွန်ရဲ့မိခင်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလာခဲံတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
”မနေ့(29.6.21)က တွတ်ပီရဲ့ရက်လည်ပါရက်လည်ဆိုရင် သိသူမသိသူ ခင်သူမခင်သူအားလုံး ဖိတ်ကြားရတာထုံးစံပါဒါပေမဲ့
အခန်းအနေအထား လက်ရှိကျန်းမာရေးအန်တရာယ်လာရောက်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုစိုးရိမ်ငဲ့ညှာရတာကြောင့်Fb ပေါ်စာတင်ပြီး အားလုံးကိုမဖိတ်ခဲ့နိုင်ဘူးစိတ်ရှိတိုင်းသာ‌ဆို ရွာလုံးကျွတ်ပေါ့နားလည်ခွင့်လွှတ်စာနာပေးနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
ပျက်ကွက်မှုအတွက် ချစ်ခင်ရသူများသို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်.သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်တည်ရှိခဲ့ရာဟိုးအဝေးမှာလဲယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေကိုလွှဲအပ်ပြီးရက်လည်ဆွမ်းသွပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်လာဖြစ်သူ မလာဖြစ်သူ လာနိုင်သူ မလာနိုင်သူလာခွင့်ရသူ
မရသူကိုယ်နဲ့ထပ်တူသူ့ကိုချစ်ပေး နှမြောပေး စိတ်ထိခိုက်ပေး ခံစားပေးခဲ့ကြတဲ့ရင်ဘတ်တူသူ ရင်ခုန်ဘက်အားလုံးကိုလှိုက်လှဲစွာ. . ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လွမ်းသူ့ပန်းခြင်း၊လှူ ဖွယ်သင်ဃန်းအစားအစာ၊အလှူငွေ
(ကိုယ်တိုင်/တဆင့်K pay) အစရှိသဖြင့် ကျန်ရစ်သူတို့မျက်နှာမငယ်အားမငယ်ရအောင်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခင်သူအားလုံး၊ ဂီတလောကမှညီအကိုမောင်နှမများ(တစ်ဦးချင်းနံမည်ရေးရင်မိုးချုပ်သွားမှာမို့ မရေးပြတော့ဘူးနော်)
အခြေအနေအရလူချင်းမဆုံနိုင်ကြလို့ လိုင်းပေါ်ကစာနာခံစား၊ငိုကြွေး၊ခွန်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခင်သူမားအားလုံး ရင်ထဲကလှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.အထူးသဖြင့်
လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုယ့်မိသားစုခေတ်တ ခိုလှုံနွေးထွေးခဲ့ရာ. ဒေသခံရွာသူရွာသားများမြို့သူမြို့သားများ.နာရေးအစမှအဆုံးထောင့်စေ့အောင် ချစ်ခြင်းမြစ်တာဖြင့်ကူညီခဲ့ကြသူ၊လှူဒါန်းခဲ့ကြသူများ၊ငိုကြွေးခဲ့ကြသူများ၊နောက်ဆုံးခရီးလာရောက်ပေးကြတဲ့နယ်ခံပရိသတ်များ၊
မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယိုအဖွဲ့သားများခိုလှုံခဲ့ရစဉ်ကာလတွေမှာဆွေမျိုးမတော်စပ်ပေမဲ့ တွတ်ပီနဲ့မိသားစုအားလုံးအပေါ် နွေးထွေးစွာ‌ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်‌ချစ်ခင်ပေးခဲ့ကြတဲ့(
တွတ်ပီကိုအရမ်းချစ်တဲ့) အမိုး နဲ့အဖွဲ့ဝင်မိသားစုများ(လုံခြုံမှုအရ တစ်ဦးချင်းအမည်‌များမဖေါ်ပြတော့ပါ)၊တုံတုံ‌လေးကိုအရိ
ပ်ကြည့်အနီးကပ်စစာင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဖိုးခွား(ဗိုက်ကလေး)ဒီအချိန်တစ်ယောက်ထဲကြေကွဲငိုကြွေးနေမဲ့တွတ်ပီချစ်ရတဲ့ညီ‌လေး သား NOVEMနာရေးအစမှအဆုံးထိလှည့်မကြည့်ရအောင်အစစစိတ်ချအားကိုးခဲ့ရတဲ့သမီး သော်သော်(မြေးချွေးမ‌လောင်းလေး))
ရန်ကုန်မှာတော့ သမီး သိမ့်ရည်ဇော်(စိတ်ထဲက ချွေးမတော်ချင်ခဲ့သူ
အမျိုးကောင်းသမီးလေး)တွတ်ပီရဲ့ ညီ‌လေး ‌စောပိုးပိုး၊ကိုယ်တို့ရဲ့မိသားစုသဖွယ်တစ်သက်လုံးရှိခဲ့၊ခါးစည်းခံခဲ့သူSaint/Sweet family၊သားသားမင်းသက်ချိဦးတွတ်၊မနီလာ၊မီးမီးနောက်‌ဆုံးတွတ်ပီရဲ့
အနီးကပ်ဆုံး အရင်းနှီးဆုံးအချစ်ဆုံး အပင်ပန်းဆုံးIDIOTS BAND(ဖိုးလုံး၊ဂျပန်၊အောင်ရဲ၊ဒီမို) နှင့်မိသားစုဝင်များ၊တွတ်ပီကိုညီလအရင်းလိုတစ်သက်တာလုံးချစ်ခင်စောင့်ရှောက်ခဲ့သူသား ကိုနေလ၊ဂိုဏ်ချုပ်နဲ့‌ဘော်ဒါများအားလုံး အားလုံး ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း. .LOVE AND THANK U ALL (သားအတွက် ပူဆွေးလွန်းပြီးစိတ်နဲ့လူမကပ်နိုင်လို့ ကျေးဇူးတင်ဖို့မေ့ခဲ့သူ၊ကျန်ခဲ့သူများရှိခဲ့ရင်လဲအောင်ပါနော်
.အော်‌ပြောရင်းဆိုရင်းကျန်ခဲ့ပြန်ပြီတွတ်ပီဘဝတစ်‌လျှောက်လုံးပြသနာမှန်သမျှ လိုက်လံဖြေရှင်းပြီးတွတ်ပီဆီအသွား တစ်လမ်းလုံးနေမကောင်းဖြစ်
မူးဝေအော့အန်တဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့တဲ့ ဘစန်း(တေးရေး အောင်နိုင်စန်း)ကျေးဇူးပါကျန်ခဲ့ရင် အတုတ်ခံရမယ်.နောက်တစ်ဦး မောင်ဇော်သစ်(သူလဲဘစန်းလိုဘဲကိုယ့်မိသားစုဒဏ်အတော်ခံခဲ့ရတာ)Next one ..အဆုံးစွန်ထိရက်စက်ခဲ့သူတစ်ဦးရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းခံရချိန်မှ ယနေ့ထိအနားမှာအရင်းအချာတစ်ယောက်လို အားပေးစောင့်ရှောက်ခဲ့သော
စာ‌ရေးဆရာမနှင်းဝေငြိမ်းနောက်ဆုံးတစ်ဦး. .ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရေးကြားကမမောပန်းနိုင်.အသက်အရွယ်မထောက်တွတ်ပီအခန်းရှိရာ ၇ လွှာထိ
အရောက်လာ အားပေးစကားတွေပြောသားအမိ ၃ယောက်ပုံလေးအမှတ်တယလာပို့ပေးတဲ့(ဦး) ဆရာဦးမြတ်ခိုင်တို့ အားလုံး ကျေးဇူးပါကျန်ခဲ့ပြီးနောက်
မှတ်ဉာဏ်ထဲထပ်ပေါ်လာသူတွေ ထပ်တင်ဦးမယ်.LOVE YOU ALL THANKS U ALL FOR EVERYTHING. .”ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
မကွေးတွင် ကိုဗစ်လူနာ ၁၃ ဦးတွေ့ရှိ၊ ဆေးကုမပေးဘဲ နေအိမ်ပြန်လွှတ်